Ngabe Izinjini Zokucinga Zikuthola Kanjani, Ukukhasa, Kanye Nokukhomba Okuqukethwe Kwakho? | Martech Zone
Ngabe Izinjini Zokucinga Zikuthola Kanjani, Ukukhasa, Kanye Nokukhomba Okuqukethwe Kwakho?
NgoMgqibelo, Okthoba 31, 2020 NgoMgqibelo, Okthoba 31, 2020 Douglas Karr
Angijwayele ukuncoma ukuthi amaklayenti azakhele awawo ama-ecommerce noma amasistimu wokulawulwa kokuqukethwe ngenxa yazo zonke izinketho ezingabonakali zokunwetshwa ezidingekayo kulezi zinsuku - ikakhulu ezigxile ekuseshweni nasekusebenziseni umphakathi. Ngibhale udaba ku ungayikhetha kanjani i-CMS futhi ngisazikhombisa izinkampani engisebenza nazo ezilingwa ukuthi zizakhele uhlelo lwazo lokulawula okuqukethwe.
Kodwa-ke, kunezimo ngokuphelele lapho ipulatifomu yangokwezifiso iyisidingo. Lapho leso yisixazululo esifanelekile, ngisacindezela amaklayenti ami ukuthi akhe izici ezidingekayo zokukhulisa amasayithi abo ukuze afune kanye nemithombo yezokuxhumana, noma kunjalo. Kunezici ezintathu ezisemqoka eziyisidingo.
Yini Ifayela Le-Robots.txt?
robots.txt ifayela - ifayela le- robots.txt file yifayela lombhalo elisobala elisenkombeni yezimpande zesayithi futhi litshela izinjini zokusesha ukuthi kufanele zifake ini futhi zingafaki emiphumeleni yosesho. Eminyakeni yakamuva, izinjini zokusesha ziphinde zacela ukuthi ufake indlela eya kumephu yesayithi yeXML ngaphakathi kwefayela. Nasi isibonelo sami, esivumela wonke ama-bots ukuthi akhase isiza sami futhi aphinde awaqondise kumephu yami yesayithi yeXML:
Yini imephu yesayithi yeXML?
XML Sitemap - Njengoba i-HTML ingeyokubuka esipheqululini, i-XML ibhaliwe ukuthi igaywe ngokohlelo. Imephu yesayithi yeXML ngokuyisisekelo itafula lamakhasi wonke kusayithi lakho nokuthi ligcine ukubuyekezwa nini. Amamephu esayithi weXML nawo angaboshwa ngamaketanga ... leyo imephu yesayithi eyodwa yeXML ingabhekisa kwenye. Kuhle lokho uma ufuna ukuhlela nokudiliza izinto zesayithi lakho ngokunengqondo (ama-FAQ, amakhasi, imikhiqizo, njll.) Kumamephu wabo wesayithi.
Amamephu esayithi abalulekile ukuze ukwazi ukwazisa ngempumelelo izinjini zokusesha ukuthi yikuphi okuqukethwe okudalile nokuthi kugcine nini ukuhlelwa. Inqubo esetshenziswa yinjini yokusesha lapho iya kusayithi lakho ayisebenzi ngaphandle kokusebenzisa imephu yesayithi namazwibela.
Ngaphandle kwemephu yesayithi yeXML, ubeka engcupheni amakhasi akho ukuthi angaze atholakale. Kuthiwani uma unekhasi elisha lokufika lomkhiqizo elingaxhunyiwe ngaphakathi noma ngaphandle. I-Google ikuthola kanjani? Mane ubeke… kuze kutholakale isixhumanisi kuyo, ngeke utholakale. Ngokujabulisayo, izinjini zokusesha zinika amandla amasistimu wokuphathwa kokuqukethwe namapulatifomu e-ecommerce ukuze abakhiphele ukhaphethi obomvu, noma kunjalo!
I-Google ithola isixhumanisi sangaphandle noma sangaphakathi esizeni sakho.
I-Google ikhomba ikhasi futhi ililinganise ngokuya ngokuqukethwe kwayo nokuthi okuqukethwe nekhwalithi yesiza sesixhumanisi esibhekiswayo siyini.
Ngemephu yesayithi yeXML, awushiyi ukutholakala kokuqukethwe kwakho noma ukuvuselelwa kokuqukethwe kwakho kube ngengozi! Abathuthukisi abaningi bazama ukuthatha izinqamuleli ezibalimazayo nabo. Bashicilela amazwibela afanayo acebile kusayithi lonke, behlinzeka ngolwazi olungahambelani nemininingwane yekhasi. Bashicilela imephu yesayithi enezinsuku ezifanayo kuwo wonke amakhasi (noma zonke zivuselelwa lapho kuvuselelwa ikhasi elilodwa), zinikeze ulayini ezinjini zokusesha ukuthi zidlala uhlelo noma azithembekile. Noma azikhiphi izinjini zokusesha nhlobo… ngakho-ke injini yokusesha ayazi ukuthi imininingwane emisha ishicilelwe.
Yini iMetadata? Microdata? Amazwibela Acebile?
Amazwibela acebile amakwa ngokucophelela nge-microdata okufihliwe kumbukeli kepha kubonakala ekhasini lezinjini zokucinga noma izingosi zokuxhumana ukuze zizisebenzise. Lokhu kwaziwa njengemethadatha. I-Google ihambisana ne- Schema.org njengezinga lokufaka izinto ezifana nezithombe, izihloko, izincazelo… kanye nenqwaba yamanye amazwibela afundisayo afana nentengo, ubuningi, imininingwane yendawo, izilinganiso, njll. I-Schema izothuthukisa kakhulu ukubonakala kwenjini yakho yokusesha kanye nethuba lokuthi umsebenzisi azokuchofoza ngokusebenzisa.
I-Facebook isebenzisa i- I-OpenGraph umthetho olandelwayo (yebo, azange afane), iTwitter inamazwibela wokucacisa iphrofayili yakho ye-Twitter. Amapulatifomu amaningi aya ngokusebenzisa le methadatha ukubuka kuqala izixhumanisi ezishumekiwe nolunye ulwazi lapho lushicilela.
Amakhasi wakho wewebhu anencazelo ecashile eqondwa ngabantu lapho befunda amakhasi e-web. Kepha izinjini zokusesha zinokuqonda okulinganiselwe kwalokho okuxoxwa ngakho kulawo makhasi. Ngokwengeza amathegi angeziwe ku-HTML yamakhasi akho ewebhu — amathegi athi, “Hey injini yokusesha, lolu lwazi luchaza le movie ethile, noma indawo, noma umuntu, noma ividiyo” —ungasiza izinjini zokusesha nezinye izinhlelo zokusebenza zikuqonde kangcono okuqukethwe kwakho bese uyikhombisa ngendlela esebenzisekayo, efanelekile. IMicrodata iqoqo lamathegi, elethwe nge-HTML5, ekuvumela ukuthi wenze lokhu.
I-Schema.org, Yini i-MicroData?
Vele, azikho kulezi ezidingekayo… kepha ngizincoma kakhulu. Uma wabelana ngesixhumanisi ku-Facebook, isibonelo, futhi akukho sithombe, isihloko, noma incazelo evelayo… bambalwa abantu abazoba nentshisekelo futhi empeleni bachofoze. Futhi uma amazwibela wakho we-Schema engekho ekhasini ngalinye, impela usengavela kumiphumela yosesho… kepha izimbangi zingakushaya uma zinemininingwane eyengeziwe ekhonjisiwe.
Bhalisa amamephu wakho wesayithi weXML nge-Search Console
Kubalulekile ukuthi, uma wakhe okuqukethwe kwakho noma ipulatifomu ye-ecommerce, ukuthi unesistimu engaphansi efaka izinjini zokusesha, ishicilele imicrosoft, bese inikezela ngemephu yesayithi yeXML evumelekile yokuqukethwe noma imininingwane yomkhiqizo!
Uma ifayili lakho le-robots.txt, imephu yesayithi ye-XML, namazwibela acebile enziwe futhi enziwa kahle kusayithi lakho lonke, ungakhohlwa ukubhalisela i-Search Console ngayinye yenjini yokusesha (eyaziwa nangokuthi ithuluzi le-Webmaster) lapho ungaqapha khona impilo nokubonakala isayithi kuzinjini zokusesha. Ungacacisa ngisho nendlela yakho yemephu yesayithi uma ingekho ohlwini bese ubona ukuthi injini yokusesha iyidla kanjani, noma ngabe kukhona izingqinamba ngayo, nokuthi ungazilungisa kanjani.
Khipha ukhaphethi obomvu kuzinjini zokusesha kanye nemithombo yezokuxhumana futhi uzothola ukukleliswa kwesayithi lakho kangcono, okufakiwe kumakhasi emiphumela yenjini yokusesha kuchofoze okuningi, futhi amakhasi akho abiwe kakhulu ezinkundleni zokuxhumana. Konke kuyanezela!
Isebenza kanjani iRobots.txt, Amamephu eSayithi, neMetaData
Ukuhlanganisa zonke lezi zinto kufana nokukhipha ukhaphethi obomvu wesayithi lakho. Nayi inqubo yokukhasa eyenziwa yi-bot nokuthi injini yokusesha ikukhomba kanjani okuqukethwe kwakho.
Isiza sakho sinefayela le-robots.txt futhi elibhekisa indawo yakho yemephu yesayithi yeXML.
I-CMS yakho noma isistimu ye-ecommerce ivuselela imephu yesayithi yeXML nganoma iliphi ikhasi futhi ishicilele usuku noma ihlele imininingwane yosuku.
I-CMS yakho noma uhlelo lwe-ecommerce ludonsa izinjini zokusesha ukubazisa ukuthi isiza sakho sibuyekeziwe. Ungawafaka ngqo noma usebenzise i-RPC nensizakalo efana nayo I-Ping-o-matic ukuphusha kuzo zonke izinjini zokusesha ezibalulekile.
INjini yokusesha ibuya ngokushesha, ihloniphe ifayela leRobots.txt, ithole amakhasi amasha noma avuselelwe ngemephu yesayithi, bese ikhomba ikhasi.
Lapho ikhomba ikhasi lakho, isebenzisa i-snippet microdata ecebile ukuthuthukisa ikhasi lemiphumela yenjini yokusesha.
Njengoba amanye amasayithi afanele exhuma kokuqukethwe kwakho, okuqukethwe kwakho kuba ngcono.
Njengoba okuqukethwe kwakho kwabelwana ngakho kuma-social media, imininingwane ecebile yamazwibela ecacisiwe ingasiza ukubuka kuqala okuqukethwe kwakho futhi ibaqondise kuphrofayela yakho yokuxhumana nomphakathi.
Tags: i-ecommerce yangokwezifisoindlelaprotocolifayela lama-robots.txti-schemasesha ikhonsoliimephu yesayithi ejwayelekilexml imephu yesayithi
Amakhono amaTekhnoloji ama-5 Abadayisi Bedijithali Bakusasa Abadinga Ukufunda Namuhla
Ungalisebenzisa Kanjani Ibhizinisi Lakho, Isiza, nohlelo Lokusebenza kwe-Apple
Nov 3, 2020 ngo-3: 47 AM
iwebhusayithi yami ayikwazi ukukhomba okuqukethwe okusha, ngilanda imephu yesayithi nama-URL kumphathi wewebhusayithi kepha angikwazi ukukuthuthukisa lokhu. Ingabe inkinga ye-google backend?
Nov 3, 2020 ngo-7: 50 AM
Hhayi ngokujwayelekile, sithini isizinda sakho? Nginamathuluzi athile engingahlaziya ngawo isayithi lakho.